Lalao Afrikanina : Mijaly ireo delegasiona malagasy any Maputo
Tsy mahagaga raha ratsy ny vokatra. « Noho ny tsy nisian’ny lehiben’ny iraka nalefa nialoha dia nisavoritaka avokoa ny momba ireo delegasiona malagasy niatrika ny lalao afrikanina any Maputo ».
Tsy isan’ireo nahazo « Village des jeux » intsony isika tamin’ity lalao ity noho ny fahataran’ny fanamboarana « accreditation », izay pasipaoro ahafahana manatrika izany. Noho ny tsy fisian’io dia voatery nandoa 50 dolara isan’olona ireo delegasiona ho setrin’ny « visa ». Hatreto ihany koa dia mbola tsy nahazo ny vola fanao am-paosy ireo atleta any an-toerana noho ny fisafotofotoan’ny fikarakarana. « Tsy nisy lalao ratsy omana tahaka an’iry, hoy ireo efa nody.
Fahataran’ny fikarakarana teo anivon’ny ministera sy ny fanakanana ny lehiben’ny iraka notendren’ny Komity olympika malagasy tsy hiatrika ny fivoriana tamin’ny volana jolay teo no isan’ny antony lehibe nahatonga ny fijaliana toy izao. « Niezaka ny niasa ihany ny lehiben’ny iraka malagasy vao notendrena, Harinelina Andriamanarivo, tamin’ity ka nahamora ny fivahan’ny olana », hoy i Jean Claude Raleha, mpitahiry volan’ny Komity olympika malagasy sady filohan’ny federasiona malagasin’ny hazakazaka am-bisikileta, izay efa tonga eto an-tanindrazana.
Mitaraina mafy amin’ny fijaliana ireo atleta any an-toerana. 25km miala ny « village des jeux » no misy ny Malagasy ka taterina amina fiarabe vao mahita sakafo. Isan’ireo nahatsikaiky tany amin’ny lalao afrikanina ny « tsy nahaizan’ireo delegasiona malagasy tonga voalohany ny hiran’ny lalao, izay mandeha amin’ny onjam-peo any an-teorana », araka ny tatitra hatrany.